A horeysay ee Turkey ..! Muddada Cashuur-bixiyaha Casriga ah wuxuu ka bilaabmay Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraA horeysay ee Turkey ..! Muddo Cashuur-bixid Smart Taxi ayaa ka bilaabatay Ankara
13 / 11 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
a horeysay turkiyede ankarada taxi smart basliyor donemi
a horeysay ee Turkey ..! Muddada Casriga Taksi wuxuu ka bilaabmayaa Ankara; Duqa degmada Ankara Mansur Yavaş, oo sameeyay ballanqaad kale oo doorashada ah, ayaa saxaafadda u soo bandhigay tusaalaha ugu horreeya ee mashruuca "Tax Taxi Project ına".
Madaxweynaha gaabis ah oo sheegaya codsiga waxaa lagu fulin doonaa dalka Turkiga ayaa markii ugu horeysay ee Turkey, nidaamka technology in ay u adeegaan 7 701 kun oo darawallada taxi magaalada siiyey war wanaagsan in loo qaybiyo oo lacag la'aan ah.
Duqa magaalada Yavaş wuxuu tilmaamay in mashruucu uu faa iidooyin badan u fidin doono oo keliya maahan dukaanada tagaasida, laakiin sidoo kale macmiisha, degmooyinka iyo gaadiidka magaalada.
Isaga oo ka jawaabaya su'aalaha xubnaha saxaafadda, ayuu Madaxweyne Yavaş yiri, ınca Marka shaqooyinka la qeexo, 7 bin 701 ee Ankara ayaa si bilaash ah loogu qaybin doonaa taksiga. Maalgelinta tan kama imaaneyso degmada. Iyadoo la raacayo heshiisyadii aan galnay, waxaa lagu rakibi doonaa si bilaash ah isticmaalka internetka, soo saarista qandaraaska muddada dheer iyo heshiisyada xayeysiinta. Taasi waa u fiican darawalka. Tani waxay leedahay xoogaa dhaawacyo ah macaamiisha. Waxay waxtar u yeelan doontaa gaadiidka degmada iyo kan magaalada. Waxay naga caawin doontaa hirgelinta Mashruuca Smart Ankara. Tagaasida waxay lahaan doontaa kamarado hore iyo gadaal. Halbeegyada ay u baahan tahay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa lagu soo daray arjigan. Marka is dhexgalka arrimaha gudaha la soo gabagabeeyo, Eebbe ha idmo markii shilka ka baxsan gaariga iyo sidoo kale sawirrada gudaha, aan arki doonno sawirrada.
Batoonnada argagaxa ayaa sidoo kale lagu dari doonaa nidaamka, kuwaas oo sidoo kale gacan ka geysan doona badbaadada dukaannada tagaasida. Markii macaamiisha ama darawalka ay riixaan batoonka argagaxa ee karşısında haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah, Xarunta Wicitaanku si otomaatig ah ayey u shaqeyneysaa waxaana loo ogeysiin doonaa ciidamada nabadgelyada xaaladaha degdegga ah.
Kaamirooyinka tagaasida waxay ku sameyn doonaan aqoonsi wajiga ah wazaarada Wazaarada Arimaha Gudaha ee qeybaha amaanka iyo aqoonsiga dadka la raadinayo. Kiis kastoo shil ah oo ka dhaca gudaha iyo dibedda tagsiga, badhanka argagaxa leh ee darawalka iyo dhinaca rakaabka ayaa awoodi doona inay duubtaan sawirrada dhacdada.
XAALADA KHUDBADKA CADAADADA CAFITALKA
Bixinta macluumaad ku saabsan habka loo adeegsado nidaamka Madaxweyne Yavaş, wuxuu yiri:
"Tusaale ahaan, Waxaan arki doonnaa imisa taksi oo hadda ku jira wadooyinka magaalada Ankara khadka internetka. Tani waxay naga caawin doontaa inaan si joogto ah u maareyno taraafikada. Kaliya basasyada ayaa haray. Waan la kulannaa iyaga. Raaxo rakaabka ayaa waliba kordhin doonta maaddaama ciriiriga taraafikada uu yaraado markii sidoo kale lagu daro nidaamka. Markaan ku soo darnaa tagaasida nidaamka, taraafikada maxalliga ah waa la qabsan doonaa.
Taasi waa; Jooji taksiyada dibada ayaa macaamiisha ka sugaya taraafikada. Mar dambe ma sugi doonaan macaamiisha. Macaamiilku wuu heli doonaa. Mar haddii ay soo degsadaan arjigan si ay uga wacaan taksi joogsiga joogsiga ah, waxay awood u yeelan doonaan inay wacaan taksiga ay rabaan. Markaa way yaraanayaan wareegga taraafikada. ”
Mansur Yavaş, Duqa Magaalada Ankara ee Magaalo Weyn, ayaa sidoo kale cadeeyay arrinta taksiga oo wuxuu yiri, zam Marka qiimaha tagsiku kaco, ganacsadehu wuxuu habeeyay 450 lira. Tan looma baahna. Si otomaatig ah ayaa loo cusboonaysiin doonaa. Intaa waxaa u dheer, darawaladayada tagaasidayada ayaa heli doona xayeysiin. Waxay ka kasban karaan lacag dheeraad ah halkan .. Buradan
Isagoo hoosta ka xariiqay inay sii wadi doonaan fulinta barnaamijyada caqliga leh ee magaalada Ankara, Duqa Magaalada Yavaş ayaa yidhi, “Smart Card goor dhow ayaa la bilaabayaa. Codsigayaga wareega, macaamiisha waxay awoodaan inay ku bixiyaan tikidhada kaararka smart iyo inay arkaan habka ay u socdaan. Wuxuu awood u yeelan doonaa inuu arko haddii uu wado gaabinaayo ama masaafada usocdo. Ma jirin wax cabasho ah oo ka dhacday Ankara, laakiin macaamilku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu si badbaado leh u safro. Hadaad ugu yeertay taksi arjiga, waad arki doontaa darawalkii tagaasida yimid, waxaad arki doontaa taargada shatiga, waxaad arki doontaa nambarka gaariga wuxuuna arki doonaa inta rodol ee uu bixin doono kahor. Qandaraaska ayaa la qaban doonaa goor dhaw. Wadahadaladii aan la galnay shirkadaha noqon doona maal-galiyayaasha waa la soo gabagabeeyey ”
Ayadoo la adeegsanayo "Smart Taxi Project" arjiga, alaabtii luntay ee tagsiga lagu celin karo milkiilaha iyadoo la qaadayo goobta iyo macluumaadka goobta. Thanks to taageerada luuqada qalaad ee softiweerka lagu ridayo taksi, dhibaatada isgaarsiinta ee dukaanleyda tagaasida iyo sidoo kale dalxiisayaasha imanaya Ankara waa la baabi'in doonaa.
Thanks to nidaamka, macmiilku wuxuu geli karaa macluumaadka safarka kiniiniga gaariga wuxuuna baran karaa lacagta lagu bixinayo inta safarka lagu jiro.
Muwaadiniinta leh nidaamka waxay baabi'in doonaan waajibka ah inay qaadaan lacag caddaan ah, tikidhada tagaasida ee ka baxsan kaarka deynta sidoo kale waxay ku bixin karaan ANKARAKART. Dukaammada tagaasida sidoo kale waxay bixin doonaan dakhli dheeri ah markay iibsadaan xayeysiin, wadayaasha tagaasida jariimadu sidoo kale waxay ku nasan doonaan dhaqaalo ahaan.
Marka la eego baaxadda codsiyada magaalooyinka ee caqliga badan, wasakheynta hawada iyo wasakheynta magaalada ayaa lagu qiyaasi karaa dareemaha in lagu meeleeyo tagaasida.
Muddada Heerka Sugan wuxuu bilaabmayaa Van
Hirgelinta Codsiga Taksi Taksiga ee Gaziantep
Adeegga Taksiyada hawada ee Mersin
Smart Baaskiilada ee Ciidanka
Gaadiidka sirta ah iyo mudada calaamadaynta ee kamaradaha 1250 ee Bursa
Wakhtiga Tigidhka leh Telefoonka Moobaylka ee Gaadiidka Dadweynaha
Wareegga Akhriska ee Bilawga ah wuxuu ku bilaabmaa Altinordu
Waqtiga Joogsiga ee Bus Bus wuxuu bilowday Denizli
Adeegga joojinta meertu wuxuu ka bilowdaa Antalya
Mashruuca Smart Ankara
Mashruuca Taksiga smart
Muddada Cashuur-bixiyaha smart ee Ankara